Ọ bụrụ na ị bụ oké music enthusiast na dị nnọọ ike iyi ka ọ dịghị ezu nke music, ahụ na-agbalị iji ndị a apps.These bụ ụfọdụ n'ime ndị kasị ewu ewu ngwa ọdịnala dị na android na iphone na-enyere gị na-enwe na-akparaghị ókè music, ike gị listi ọkpụkpọ na-ege ntị song gị oke ebe ọ bụla ị site nnọọ nbudata ndị a ngwa ọdịnala.
The TunesGo software-enyere onye ọrụ nyefee faịlụ n'etiti iche iche na ngwaọrụ. TunesGo enye gị ohere ike gị onwe gị playlist na nwere ihe haziri ahazi n'ọbá akwụkwọ. The software zuru okè mgbe ọ na-abịa na-ebufe faịlụ site na otu Apple ngwaọrụ ọzọ.
Top 5 atụmatụ nke TunesGo
• TunesGo-enye ohere onye ọrụ nyefee music faịlụ n'etiti android na iTunes.
• Recovers gị furu efu music mfe
•-enye gị ohere tọghata YouTube videos n'ime mp3 faịlụ
• Hazie n'ọbá akwụkwọ
• enye gị ohere ele na mbupụ sms eri
Ya mere, ebe ka nke a na software Akara?
•-enye gị ohere jikọọ iche iche ngwaọrụ ozugbo
• arụ ọrụ dị ka oké ọzọ ka iTunes
•-enye gị ohere irè jikwaa gị media gafee gị Apple ngwaọrụ
• The price bụ a bit elu tụnyere iTunes ma ọ bụ iCloud ma mgbe ahụ atụmatụ nwere ọtụtụ ọzọ ọtụtụ dị ka mma.
• Ị ga mkpa zụrụ pro version bụrụ na ị chọrọ ụfọdụ dị oké njọ na-arụ ọrụ mere. Ma ọ bụghị na e nwere na-agaghị emeli ka ịnọ na-enwe ike nyefee 10 songs na ikpe version.
Pandora bụ a na-ewu ewu na-eji ngwa na-eji maka nkwanye music na internet. I nwekwara ike na-ege ntị na redio ụgbọ na ike ndepụta ọkpụkpọ gị. Pandora-eme ihe dị mfe na oké ọnụ. Pandora dị na iphone na android. Pandora bụ ndị kasị dị irè na ọtụtụ ebe ada music ngwa.
• Ọ nwere ọtụtụ collection nke music
• nwekwara ike-eji na-enweghị internet
• Pandora adịghị achọ ihe ọ bụla registration
• The free version nwere ọtụtụ mgbasa ozi
•-akwụ a kwa ọnwa ndenye aha ego
Price- $4.99 / ọnwa
3. Iskysoft audio edekọ
Iskysoft audio edekọ bụ ihe kasị mma software maka nbudata music si Pandora n'ihi na windo na Mac. Ọ bụ nke ukwuu pụrụ ịdabere na-enye gị ohere ịhọrọ site na a dịgasị iche iche nke songs. Ọ na-ekwe ka ịdekọ music si online. Ị nwekwara otu nhọrọ nke na-agbalị ikpe mbipute tupu ị zụrụ Iskysoft audio-edekọ ihe.
• Dị nnọọ mma ụda àgwà
• Ọ na-enye dịgasị iche iche nke music collection
• Ọ na-arụ ọrụ na-anọghị n'ịntanetị nakwa
• Ọ na-ike ga-eji na ọtụtụ ngwaọrụ
• The price bụ obere ọnụ
• Ọtụtụ mgbasa ozi
• Ọ dịghị ihe ndekọ larịị egosi na ọ dịghị iche iche ndekọ larịị akara.
PanDown-enyere gị aka download Pandora music maka android. Ọ na-ekwe ka ị na-agagharị na site na ọhụrụ songs na-azọpụta ha gị playlist. Ọ bụ nanị ngwa na android site na nke ị nwere ike ibudata Pandora music. A na ngwa dị na free version na akwụ ụgwọ version. Nanị ihe dị iche bụ Ị nwere ike iwepu mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ version
• Ọ bụ ngwa ngwa na ezi
• Ọ bụ nnọọ simplistic na mfe iji
• Ọ nwere Good ọrụ interface
• Ọ bụ nnọọ free nke na-eri
• Mgbe ụfọdụ, ọ mkpọka mberede
• Ọ na-achọ njikọ Ịntanetị idekọ a track
• Ọ nwere ike dakọtara na ụfọdụ igwe
• Ọ na-adịghị weghachite furu efu ọmụma
Pandora Downloader bụ ndị kasị ewu ewu Downloader maka nbudata Pandora music na iphone. Pandora Downloader-enye gị ohere ikwu mgbasa ozi na ibudata music ngwa ngwa. Ọ na-enyere gị aka na-akparaghị ókè free music ngakọrịta na ibudata ọ bụla song na-egwuri.
• Enye gị na-ege ntị obodo na music enweghị njikọ Ịntanetị.
• Otu ad free ahụmahụ
• Zuru free
• Ò Kwekọrọ n'Ozizi iphone, ipad na iPod.
• Low àgwà nke ụda
• Mgbe ụfọdụ mkpọka mberede
Nyiwe ha dị na
Wondershare TunesGo Nkwado OS X, Windows iOS na Android $39.95 ọ dịghị ezi
Pandora Android, iPhone, iPad - $4.99 / ọnwa Nanị dị na United States, Australia na New Zealand nkezi
iSkysoft audio edekọ Windows na Mac - $29.00 ọ dịghị ezi
PanDown Android free ọ dịghị nkezi
Pandora Downloader iPhone free ọ dịghị ogbenye
> Resource> Music> Top 5 Pandora Music Downloader